ỤLỌ NCHE: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 Ka 2020	• 12 Comments
A na-anụwanye ụda dị iche iche na-ekwupụta na ọ bụrụ na e mere coronavirus n'ezie na ụlọ nyocha. Ebe mwakpo a na-akpọ ndị aghụghọ Nu.nl wakporo m na mbido, mgbe m mere ka amata na nje dị otu a nwere ike isi n'ụlọ nyocha pụta, ọ bụ otu ihe mgbasa ozi na-ekwu ugbu a […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 Ka 2020	• 4 Comments
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, a gbara ọkara ụwa egwu na-atụ egwu nke onye iro coronavirus a na-adịghị ahụ anya. Otutu enweghi echiche ka usoro mgbasa ozi na ndoro-ndoro ochichi, na mmekorita ike nke ike (nke guzoro kemgbe oge ncheta), na-ekpebi nghota nke uwa anyi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-ahụ ma na-ekwere bụ nke nwere agba dị ka […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 25 Ka 2020	• 15 Comments
Enweghị m iPhone ya mere enwebeghị ike ịlele ya, mana ebe nrụọrụ weebụ Apple doro anya banyere ya. Ọ bụ ihe nwute, ọ bụ mmadụ ole na ole na-agụ usoro na ọnọdụ tupu ịwụnye mmelite ma ọ bụ ngwa, mana ị ga - enweta ngwa nsuso nke agụnyere na mmelite iOS 13.5 kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị jụọ m, […]
N'ime nkeji iri atọ na atọ na-esote, lee anya na Maurice de Hond, nwoke nọ n'azụ ntuli aka obodo buru ibu nke anyị nwere ike "ịtụkwasị obi". De Hond achọpụtala na ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na otu iwu na ọkara nke ọkara bụ ihe nzuzu na coronavirus na-agbasa ngwa ngwa mgbe ikuku adịghị mma. Maurice kwenyesiri ike na […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 21 Ka 2020	• 16 Comments
Ọ bụrụ na ị na-eso usoro mgbasa ozi, nsogbu adịghị na Netherlands ma e wezụga nje corona, nke ka na-ezo dị ka bọmbụ na-egbu oge. Ebee ka akụkọ banyere akwụkwọ akụkọ banyere ịkọwa ahụhụ onwe onye dị n'ihu ndị mmadụ? Ọ bụghị nke ahụ siri ike ịnweta ọnụ ọgụgụ RIVM […]
Nleta ha: 2.526.440